IMacOS ePhakamileyo yeSierra inendlela emnyama efana neMacOS 10.14 | Ndisuka mac
IMacOS ePhakamileyo yeSierra inendlela emnyama efana neMacOS 10.14
Kule mpelaveki besisazi ngokuvuza kwesicelo, ezinye zeempawu zomnxibelelanisi we-macOS 10.14, kubandakanya indlela emnyama, Oko kuyakwaziswa kuthi ngale mvakwemini kwinkomfa yonjiniyela, esiza kukuxelela ngayo ngeSoy de Mac ukusuka nge-19 ngokuhlwa kwe-CET eSpain.
Owona mmeli umfowunelwa wokuqala yayiyimowudi yasebusuku yokwenyani kulo lonke ujongano. Ngokukhawuleza, Abaphuhlisi baya kusebenza ukufumana enye indlela yokwenza le modi ibe kwinguqulelo yangoku ye-macOS, eSierra ephezulu. Kubonakala ngathi ukukhangela kunike iziphumo ezilindelekileyo.
Nangona lo myalelo wesiphelo ungasebenzi kwimowudi emnyama ye-macOS 10.14, isibonisa umbono wokuqala ukuba kuyakuba njani ukusebenza usuku lwethu usuku nemodi yasebusuku yenziwe yasebenza. Kwezi skrini zilandelayo asinika zona kuTwitter UCorbin dunn, siyabona ukuba kunokuba kunjani ukusebenza nge-TextEdit kule ndlela ifunwayo kutsha nje.
Ukwenza lo msebenzi usebenze, kufuneka sisebenzise isicelo seTheminali kwaye sibhale kwibhokisi yencoko yababini:
Ngoku sinokubona imowudi emnyama kwisicelo se-TextEdit, esikule ndlela imnyama ingabonakali ilungile. Singasenza esi senzo ngesicelo esahlukileyo. Ngenxa yoku kufuneka silibuyisele igama /TextEdit.app/ngegama lesicelo esifuna ukusibona kwimowudi emnyama. Kwelinye icala, olunye uvavanyo olwenziwe, umzekelo nge-Finder, aluphumi kakuhle, kuba kubonakala ngathi iMacOS ibuyele kwiminyaka engama-20.
Ukubuyela kwimowudi emiselweyo, kufuna ukuqala kwakhona ikhompyuter. Le misebenzi isetyenziselwa ukuxhoma nje okomzuzwana kwaye ucinge ukuba kuya kuba njani ukusebenza emva kobumnyama, ukuqala ngoSeptemba, xa sibona ingxelo yokugqibela ye-macOS 10.14. Kwelinye icala, Kuya kuba sengqiqweni ukuba le ndlela imnyama ibonwe kwi-beta eya kukhutshwa esiphelweni seKeyynote yale mvakwemini.
Ezinye izinto ezitsha zeMacOS 10.14 esizaziyo kule mpelaveki zezi: Usetyenziso lweendaba ye-macOS, nangona ingaziwa ukuba yeyiphi na amazwe eza kufumaneka, kunye negama elinokubakho lenkqubo entsha yeMac. Idesktop ibonakala iyintlango ebusuku kwaye ngenxa yoko igama leMojave libonakala njengendawo yokubheja oyithandayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Tutorials » IMacOS ePhakamileyo yeSierra inendlela emnyama efana neMacOS 10.14
I-MacBook Pro engaziwayo ibonakala kwiibhentshi
Qhubeka neqela lokuba ndivela kwi-Mac yanamhlanje